घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू राल्फ Hasenhuttl बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य
हाम्रो राल्फ हसेनहट्टलको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
यो राल्फ हसेनहटको जीवनको प्रारम्भिक दिनदेखि नै प्रसिद्ध भएदेखि यता संक्षिप्त प्रस्तुति हो। तपाईंलाई बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवन र क्यारियरको प्रगतिको चित्रण सार हो।
राल्फ Hasenhuttl जीवन कहानी
हो, लिभरपूलले गरेको बिजयको बारेमा सबैलाई थाहा छ Klopp आफ्नो 11 संग क्रोधित। यद्यपि धेरैले उहाँको जीवनी पढेका छैनन जुन धेरै आकर्षक छ। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
राल्फ Hasenhuttl बचपन कहानी:
सुरुमा, उनी उपनाम "एल्प्सको Klopp" मनपर्दैन। राल्फ हसेनहट्टल अगस्त १91967 को अस्ट्रियाको ग्राज शहरमा। औं दिनमा जन्मनुभएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, इंग्रिड र आफ्नो बुबा, गिलबर्टमा जन्मनुभएको थियो।
राल्फ हसेनहट्टलका अभिभावकहरूसँग भेट्नुहोस्।
राल्फ Hasenhuttl परिवार मूल:
इग्रिड र गिल्बर्टको छोरा अस्ट्रियन हो। साथै, उनको पारिवारिक उत्पत्ति निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानले उनी अस्ट्रियाको जर्मन भाषा बोल्ने ग्राज (उनको जन्म शहर) भन्ने हुन् भन्ने कुरा देखाउँदछ।
सानो छँदा, ग्राज मूल निवासी धेरै खेल र नाच अभ्यास गर्थे। वास्तवमा, कहिलेकाँही उहाँ आफ्नी बहिनीसँग नाच्नुहुन्थ्यो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, Hasenhuttl का आमा बुबा को लाग्यो ऊ अल्छी छ किनभने उसले शुरूमा आफ्नो बचपनको कुनै पनि चासो प्रतिबद्ध गर्न चाहँदैन थियो।
राल्फ Hasenhuttl ग्राज शहर मा हुर्कियो।
राल्फ Hasenhuttl परिवार पृष्ठभूमि:
तत्कालिन नौजवानको गैर-प्रतिबद्धले उनका आमा बुबालाई चिन्तित तुल्यायो। त्यसकारण उनीहरूले भविष्यको योजनाको बारेमा उहाँलाई अक्सर प्रश्नहरू सोधे। वास्तवमा, मध्यम वर्गको जीवनशैली बिताउने हसेनहट्टल अभिभावकहरूको लागि पैसा समस्या थिएन। तिनीहरू केवल उहाँ एक सफल व्यक्ति बन्न सुनिश्चित गर्न चाहन्थे।
राल्फ Hasenhuttl खेल क्यारियर:
भाग्यवस, बहु-खेल केटा फुटबल प्रतिबद्ध। वास्तवमा, उनी १० बर्षको उमेर भन्दा पहिले नै स्थानीय क्लब जीएकेको एक हिस्सा बने। यो टोलीसँगै उनले श्रेणीमा उत्रेका थिए र १ 10 ––-–– सत्रमा उनले पहिलो टीमको शुरुआत गरेका थिए। त्यसपश्चात, Hasenhuttl को FK अस्ट्रिया Wien मा एक उत्पादक जादू थियो।
GAK मा त्यसपछि त्यसपछिको विवरणहरू हेर्नुहोस्।
उनले बेल्जियमका पक्षहरू, मेचेलेन र लिअर्सको लागि खेल्नु अघि अगाडि अस्ट्रिया साल्जबर्गको रूपमा आफ्नो व्यापार चलाए। अन्त्यमा, उनी जर्मन फर्किए जुन एफसी कोलन, ग्रीथर फर्थ र बायरन म्यूनिख द्वितीयसँग जुत्ता बोक्नु अघि उनका दागहरू थिए।
राल्फ Hasenhuttl फुटबल ब्यवसाय मा प्रारम्भिक वर्ष:
धेरै प्रबन्धकहरु जस्तै, Hasenhuttl तल बाट आफ्नो कोचिंग क्यारियर शुरू गर्नुभयो। उनले B बुंदेस्लिगा आउटफिट अनटरचेचिंग युवा म्यानेजरको रूपमा शुरू गरे। पछि, उहाँ एक सहायक कोच बन्नुभयो र अन्तत: उन्टरचेचिंगको साथ प्रमुख कोच बन्नुभयो जुन उहाँसँग थोरै सफलताहरू थिए।
उनले तलबाट सफल टोलीहरूको साथ शुरू गरेका थिए।
राल्फ Hasenhuttl जीवनी - प्रख्यात कहानी को लागी:
आउँदो वर्षहरूमा, युवा कोचले आफ्नो नाम कमाउन सक्दो प्रयास गरे। पहिले, VfR Aalen को साथ जुन उसले २ बुन्डेस्लिगामा पदोन्नती गर्न मद्दत गर्‍यो। धेरै समय लागेन Hasenhuttl Hantavirus संग तल थियो।
भाग्यवस, उहाँ तीन हप्तामा निको हुनुभयो र प्रचार गर्ने तरिकामा फर्कनुभयो। कुन बोल्नुहुन्छ, के तपाईंलाई थाहा छ कि उसले आफ्नो अर्को टीम एफसी इ Ing्गलस्टैड ० 04 लाई पहिलो पटक बुन्देस्लिगामा पदोन्नति प्राप्त गर्न नेतृत्व गर्यो? अब तपाईंलाई थाहा छ।
कसले ईन्गोलस्ट्याटलाई पहिलो पटक बुन्डेस्लिगामा पदोन्नती गर्न मद्दत पुर्‍यायो हेर्नुहोस्।
राल्फ Hasenhuttl बायो - ख्याति कथा उठ्नुहोस्:
उनको व्यवस्थापकीय क्यारियरको चरम सीमामा, मेहनती कोच भर्खरको प्रमोट गरिएको आरबी लाइपजिगमा सामेल भए। चाखलाग्दो कुरा के हो भने, उनले उनीहरूलाई शीर्ष स्थानमा पहिलो उडान पहिलो स्थानमा दोस्रो स्थानमा पुग्यो। जर्मन पक्षको साथ अर्को सीजन खर्च गरेपछि, Hasenhuttl २०१2मा साउथेम्प्टनको कलको जवाफ दिनको लागि प्रस्थान गर्यो।
सन्तहरू उनी २०१ their मा उनको व्यवस्थापक बन्न पाउँदा खुसी थिए।
हसेनहट्टलले मार्क ह्युजेसको उत्तराधिकारी हुनको लागि दक्षिण तटमा आएदेखि नै प्रभावकारी तरिकाले राम्रो अभिनय गरिरहेका छन्। यद्यपि उनको टोलीले अक्टूबर २०१ in मा लेस्टरमा ऐतिहासिक9.० को घरेलु हानी भोग्नुपरेको थियो, तैपनि उनले उनीहरूको विश्वासलाई निरन्तरता दिए र पंडितहरूले वर्णन गर्ने कुराको लागि उनीहरूलाई अगुवाई गरे। प्रिमियर लिगको सबैभन्दा ठूलो पुनरागमन.
सेन्ट्सलाई प्रिमियर लिगमा राख्ने उनको प्रयासले उनलाई रेकर्ड प्रभावशाली जीत देखेको छ। यस्तो जीतको सबैभन्दा नयाँ सेंट संत मा लिभरपूल मा 1-0-XNUMX अविश्वसनीय जीत थियो। परिणामस्वरूप, मेहनती कोच खेल पछि भावनात्मक भयो किनकि लिभरपूललाई ​​हराउनु भनेको सपना साकार भएको थियो। उहाँ सन्तहरूलाई आशिष्‌ दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन र निश्चित रूपमा उनीहरूलाई अझ उच्च स्थानमा पुग्नुहुनेछ।
राल्फ Hasenhuttl पत्नी को हो?
प्रत्येक शानदार प्रबन्धकको पछाडि जीवन साथी हो। तपाईले सोचे जस्तो हुन सक्छ, Hasenhuttl कि विभाग मा अभाव छ। उनकी श्रीमतीको नाम सान्द्रा हो, र उनीहरू धेरै वर्षदेखि दम्पती भएका छन्। उहाँ उनकी पत्नी हुन राजी हुनु अघि सान्ड्रा उनकी प्रेमिका भएको हुनुपर्छ।
राल्फ Hasenhuttl उनकी पत्नी Sandra संग।
यसको अतिरिक्त, उनी प्रायः व्यवस्थापकको छेउमा हुन्छ जब ऊ आधिकारिक कर्तव्यमा हुँदैन। अन्तिम तर कम्तिमा होइन, उनीहरूको विवाह दुई बच्चाको साथ आशिष हो। तिनीहरू प्याट्रिक र फिलिप हुन्। प्याट्रिक अलि लोकप्रिय छ किनकि ऊ जर्मन for का लागि फुटबल खेल्छ। iga लिगा पक्ष - अगाडिका रूपमा एसपीभीजी अनटरहेचि।।
राल्फ Hasenhuttl यहाँ आफ्नो छोरो पैट्रिक हडताल सुझाव दिनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ।
राल्फ Hasenhuttl परिवार जीवन:
कुशल प्रबन्धकहरू मंगलमा बनेका छैनन्। तिनीहरू परिवार पत्ता लगाउन योग्य वंश संग छ। हामी तपाईलाई राल्फ हसेनहट्टलका अभिभावकको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं। हामी यहाँ तिनका भाईबहिनीहरू र आफन्तहरूको विवरण पनि उपलब्ध गराउँदछौं।
राल्फ Hasenhuttl पिता को बारे मा:
पहिले उल्लेख गरिएझैं कोचका बुबाको नाम गिलबर्ट हो। के तपाईलाई थाहा छ कि उनी नर्तक थिए? थप रूपमा, गिलबर्ट एक कुशल चित्रकार हुन्। यो जीवनी लेख्दा उहाँ 80० वर्ष नायक हुनुहुन्छ। जे होस्, ऊ अझै पनि फिट र बढी दशकहरु बाँच्न को लागी तयार देखिन्छ।
राल्फ Hasenhuttl आमाको बारेमा:
अर्कोतर्फ, प्रबन्धकको आमाको नाम इन्ग्रिड हो। उनका पति जस्तै उनी पनि नर्तक थिए। नृत्यका साथै, इrid्ग्रिडको बेकिंग र फेसनमा रूचि छ। Hasenhuttl उनको गृहनगर मा सबै भन्दा राम्रो कुकीज बनाउन को लागी श्रेय।
राल्फ Hasenhuttl आफ्ना माता पिता संग।
राल्फ Hasenhuttl बहिनीको बारेमा:
आफ्ना आमा बुबाबाट टाढा, त्यहाँ अर्को व्यक्ति छ जसलाई कोच नजिक छ। यो उनको सानो ज्ञात बहिनी छ जसको संग उनी हुर्किए। उनको पक्षमा, त्यहाँ अन्य कुनै दाजुभाइ / दिदीबहिनीको उल्लेख गरिएको छैन।
राल्फ Hasenhuttl सम्बन्धहरूको बारेमा:
के तपाई प्रबन्धकको हजुरबा हजुरआमालाई खोज्दै हुनुहुन्छ? हामी पनि त्यस्तै छौं। के तपाईं उसका काका, काकी र काका-काकी का रेकर्ड राख्न चाहानुहुन्छ? क्लब मा स्वागत छ। आशा छ, उसको भतिजा र भतिजीहरूले उसलाई कुनै दिन चिन्ने छन हामी आशा गर्दछौं।
राल्फ Hasenhuttl निजी जीवन:
फुटबल बाहिरको प्रबन्धक को हो? के उहाँ साँच्चिकै हुनुहुन्छ? 'अल्पाइन क्लोप' जसले स्वीकार्छ कि ऊ अलि पागल छ? उनको व्यक्तित्व को बारे मा अतुलनीय तथ्यहरु को रूप मा चुस्त बस्नुहोस्। सुरु गर्नका लागि, Hasenhuttl शाब्दिक अलि पागल छैन। ऊ अलि अनौंठो छ। अनौंठो, हाम्रो मतलब त्यो कोचको तपाईको नियमित तस्बिरमा अयोग्य छ।
ऊ प्रशंसनीय छ, अनुशासित छ र दुध लाई रक्सी मन पर्छ। Hasenhuttl पियानो खेल्न मन पर्छ, एक गतिविधि जो आफ्नो शान्त प्रकृति संग राम्रो जान्छ। अन्य पटक ऊ टेनिस खेल्छ, स्कीइ,, आइस हक्की र स्केलिy क्यानियन भित्तामा संलग्न हुन्छ।
ऊ बोल्डिंग पनि रमाउनको लागि उमेरको छैन।
राल्फ Hasenhuttl जीवनशैली:
प्रबन्धकले कसरी आफ्नो पैसा खर्च गर्छ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने बारे जानकारी प्राप्त गर्न तपाईं यहाँ हुनुपर्दछ। सुरु गरौं उसको आम्दानीबाट। ऊ हरेक वर्ष £ million मिलियन लिन्छ र प्रिमियर लिगमा शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ-भुक्तान प्रबन्धकहरू मध्ये एकमा पर्छ।
हामी सबै भव्य जीवनशैलीको बारे सचेत छौं जुन फुटबल व्यवस्थापनको साथ आउँदछ। विदेशी कारहरू हुनु र भव्य घरहरूमा बस्नु नै उसको चिन्ताको विषय हो। वास्तवमा उसले सबै कुराको लागि प्रावधानहरू राख्छ कि उसले छुट्टै काम पनि गर्छ कि उसले आफ्नो काम राम्रोसँग गर्छ।
राल्फ Hasenhuttl बारे तथ्यहरू:
यो टुक्रालाई प्रबन्धकको बचपनको कहानी र जीवनीमा समेट्न, यहाँ तथ्यहरू छन् जुन तपाईं उसलाई चिन्नुहुन्न।
प्रति वर्ष £ 6,000,000।
प्रति महिना £ 500,000।
प्रति हप्ता £ 115,207।
प्रति दिन £ 16,458।
प्रति घण्टा £ 686।
प्रति मिनेट £ 11।
प्रति सेकेन्ड £ 0.18।
राल्फ Hasenhuttl हेर्दै बायो, साउथेम्प्टनसँग उसले कमाएको कुरा यही हो।
तथ्य # १ - जासूस:
जब जर्गन क्लप्प Dortmund को प्रबन्धक थियो, उनी अस्ट्रिया मा एक प्री-सीजन भ्रमण थियो। यो त्यस्तो समय हो जुन हसेनहट्टललाई भर्खर भर्खर भर्खरको पहिलो क्लबबाट बर्खास्त गरिएको थियो जुन उनले अनटरहेचिching व्यवस्थापन गरेका थिए। यसैले, उनीसँग टायरमन्डको प्रशिक्षण सत्र अवलोकन गर्न पहाडको बाइकमा चढेर सवारी गर्ने समय भयो। कसैलाई थाहा थिएन ऊ को हो किनकि उसले हेलमेट लगाएको थियो।
तथ्य # १ - Klopp संग सम्बन्ध:
ह्यासहट्टल र लिभरपूलको म्यानेजर सात हप्ताको दूरीमा जन्मेका हुन् भन्ने तथ्यलाई थोरै मानिसहरूले थाहा छ। साथै, तिनीहरू एकै समयमा उनीहरूको कोचिंग पथहरू शुरू गरे। अझ के, Hasenhuttl जर्मन प्रशंसा गर्दछ। यद्यपि उनी उहाँसँग तुलना गरिएकोमा रमाउँदैनन्। उहाँ आफ्नो सानो तरिकामा विशेष र अतुलनीय हुनुहुन्छ।
अस्ट्रियनले उनको जर्मन समकक्षलाई सम्मान र सम्मान गर्दछन्।
तथ्य # १ - प्रभाव:
एक उज्जवल कोच बन्न उनको उदारता बीच, Hasenhuttl पनि केही युवाहरु को विकास को लागि महत्वपूर्ण थियो। वास्तवमा, उसले तारा बाहिर बनायो तिमो वार्नर, नाबी केइटा, र Emil Forsberg।
प्रबन्धकले कुनै चिन्ह वा इशारा गरेको छैन कि विश्वास को मामला मा आफ्नो स्थिति प्रकट गर्दछ। यद्यपि, त्यहाँ उनीहरु क्रिष्टियन छन् भनेर सूचकहरु छन् उदाहरणको लागि उसको पहिलो नाम (राल्फ) लिनुहोस्, र उसको बुवा (गिलबर्ट)। के तपाईंले यति चाँडै उनका छोराहरूलाई बिर्सनुभयो? पुष्टि गर्न माथि स्क्रोल गर्नुहोस्।
राल्फ हसेनहट्टलको बाल्यकाल कहानी र जीवनी मा यस जानकारी को टुक्रा को पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि उहाँ कसरी कथा हुनुहुन्छ 'क्रान्तिमा आयो' र सन्तहरूलाई हप्कायो हामी तपाईलाई विश्वास गर्न हौसला दिन्छौं कि हामी हामी बारम्बार गर्छौं। जसरी हसेनहट्टल साउथ्याम्प्टन आउनु अघि अन्य टोलीहरूमा क्रान्ति गर्दै थिए।
शब्द र कार्यहरूमा उनको फुटबल र प्रबन्धकीय क्यारियरमा उनीहरूको समर्थनको लागि म्यानेजरका अभिभावकहरूको सराहना गर्न अब यो behooves। Lifebogger मा, हामी सटीकता र निष्पक्षता संग बचपन कथाहरू र जीवनी तथ्या deliver्क वितरित मा गर्व गर्दछौं। यदि तपाइँ केहि पनि देख्नुहुन्छ जुन ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा तल सन्देश छोड्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: राल्फ Hasenhuttl।
उपनाम: "आल्प्सको क्लोप।"
जन्म मिति: अगस्त १91967। को नौौं दिन।
जन्मस्थान: अष्ट्रियाको ग्राज शहर।
अभिभावक: इंग्रिड (आमा), गिल्बर्ट (बुबा)
Siblings: एक बहिनी
सेमी मा उचाई: 191 सेमी।
सोख पियानो, टेनिस, स्कीइ,, आइस हकी र स्केलि can क्यानियन भित्ताहरू प्ले गर्दै।
पारिवारिक मूल: अस्ट्रिया
तलब Million मिलियन